Madaxda Puntland oo kulan xasaasi ah yeelan doona & Xog hor dhac ah
June 29, 2020 Mahad Jama 2
GALKACYO(P-TIMES)- Kadib markii goor dhoweyd xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ay go’aano kasoo saareen hanaanka doorasho ee dalka iyo xaaladaha haatan taagan ayaa waxaa ayaa soo baxaya warar sheegaya in kulan ay wada yeelan doonaan madaxda ugu sar saraysa ee Puntland.
Kulan oo ah mid wada tashi iyo wax iska weydiin ah ayaa waxaa lagu gorfayn doonaa xaalada dalka, shirka Muqdisho ee Puntland ay ka baaqatay iyo doorashooyinka kusoo wajahan dalka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni ayaa dadaalo badan ku bixinaya maanta la kulanka xubnaha ug sareeya dowladda iyo saaxiibadiisa khaaska ah si ay kulan uga wada yeeshaan xaalada dalka iyo mowqifka Puntland kaga aadan shirka Muqdisho ee madaxweyne Farmaajo uu ku casuumay hogaamiyaasha dowladd goboleedyada.
Dhinacyada ka qayb gali doona kulanka madaxtooyada Puntland ayaa wax iska weydiin doona hanaanka ugu haboon ee Puntland ay ku muujin karto ujeedkeeda iyo waxyaabaha ay saluugsan tahay, waxaana hogaamiyaasha qaarkood ay qabaan in Puntland ay go’aan adag ka qaadato arimaha haatan socda si looga gaashaanto galaan gal siyaasadeed oo ay samayso dowladdu.
Arinta ugu daran ee is weydiinta mudan ayaa ah qaabka ay u dhici doonto doorashada soo socota ee Soomaaliya, taas oo ay ansixiyeen gollaha shacabka Soomaaliyeed halka Puntland iyo xubnaha mucaaradka ah ay diidan yihiin qorshaha doorasho ee dalka oo ay saluugeen.
osman aidurus says:
puntland waxba yaysan waadan go,an aan fulayn abdiwali ayan aragnay eraygi ahaa bankimoon we 4.5 iyo didmadii galmudug marka yaysan isceebayn hadaysan qadankarin go,an abdulahi yusuf iga mumnuucay dolawladii abdikasim xata kan qashinka guraxata hawada lagucunayay iskadaa mid xilsarehaya warkisa
puntland waxba yaysan qaadan go,an aan fulayn abdiwali ayan aragnay eraygi ahaa bankimoon we 4.5 iyo didmadii galmudug marka yaysan isceebayn hadaysan qadankarin go,an abdulahi yusuf iga mumnuucay dolawladii abdikasim xata kan qashinka guraxata hawada lagucunayay iskadaa mid xilsarehaya warkisa lakin laga jecli lugta jecli hadal xun oo adan gk.aankisa fulinkarin socod siinkarin dadkana wuukaasifogayn cadawadna wuukusamayn.